China ndị ọzọ Factory, Ndị ọzọ na-eweta
JINGYE Vetikal Autoclave bụ obere ikike ịga ụlọ ọgwụ, arụnyere na igwe eletriki eletriki, onye na-ahụ maka nrụgide-nrụpụta-okpomọkụ, valvụ nchekwa, valvụ na-ewepụta, ihe ngosi ọkụ-mgbali, mgbịrịgba mkpu maka ịmecha ụlọ na ngwa ọrụ iji kpochapụ ike nke kpo oku na-akpaghị aka. Ọ nwere uru dị na nsị dị mma, ọrụ dị mma, nchekwa, obere obodo na-eri ego ma dị ọnụ ala.
Agụụ emulsifying igwekota mepụtara na arụpụtara site JINGYE bụ in-ketulu na-achụsasị ma na-agbari usoro mmekorita homogenizing maka nyocha na mmepụta nke ịgwakọta nke ihe ndị dị elu.
Ejiri sistemu na - akpali akpali, ịgbakọ aka/ emulsifying usoro, kpo oku usoro, agụụ nsogbu usoro, okpomọkụ na mgbali N'ịchọpụta usoro, eweli usoro, eletriki akara usoro na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu, wdg
E nwere ibuo ụdị, pilot ụdị na ulo oru mmepụta ụdị maka ndị ahịa na-ahọrọ, na ike na-enye ahaziri ọrụ dị ka ndị ahịa 'pụrụ iche usoro chọrọ.
JINGYE inggwakọta tank bu akpa maka ịchekwa na ịgwakọta ihe. Emere dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ siri ike, JINGYE inggwakọta tankị nwere keed uru maka ndị ahịa anyị. Anyị inggwakọta tank na-eje ozis ọtụtụ ụlọ ọrụ na anyị enwetawo ahụmịhe bara ụba na nrụpụta&imewe. Ma ị kwesịrịtinye nkpuchi maka agụụ ma ọ bụ nrụgide usoro, tinye jaket maka jụrụ ma ọ bụ kpo oku, gbakwunye igwekota maka emulsify ma ọ bụ gbasaa, a pụrụ ịmepụta tank anyị iji hụ na usoro nhazi gị na-aga nke ọma.
JINGYE Ọrụ Nsogbu Kuki bụ a na-akpọkwa ihe nrụgide ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụ a nsogbu esi nri arịa nwere mkpuchi mechiri emechi, hụ na esi nri ngwaahịa na nrụgide.
JINGYE Steam Jacketed Kettles nwere a pụrụ iche ala ala na akwa jaket zuru ezu, ma kpoo ya oku site na a eziokwu hemispherical jaket oyi akwa, hụ na ihe na-ewe iwe evenly na usoro nke uka nri.
Na ekele na hemispherical ala, ebe kpo oku ka ukwuu, na-enyere ndị ahịa aka inweta ngwa ngwa ọkụ ọkụ na obere ume.
Na mgbakwunye, enweghị ikpo ọkụ na njikwa ọnọdụ okpomọkụ ziri ezi, nri meriri’na-enwu ọkụ ma ọ dịghị mkpa nyocha mgbe niile.
E wezụga nke ahụ, anyị nwere ụdị igwekota dị iche iche, maka ndị ahịa dị iche iche iji nweta ezigbo ngwakọta mmetụta.